Daawo: Kooxda Liverpool oo xasuuq ba'an loo geystay %
By Laacib News	 On Jan 4, 2019
Laacib Sports : Naadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee guuldaro xili ciyaareedkan Liverpool ku baday horyaalka Premier league, Goolasha ay dhaliyeen Serigo Aguero iyo Leroy Sane ayaa Manchester City ka caawiyay in ay saddexda dhibcood ee lixda dhibcod u dhigmayay ka qaadatay Kooxda uu hogaamiyo Macalin Klopp.
Goolka Madiga ah ee Roberto Firmino uu ciyaarta dib ugu soo celiyay Liverpool isaga oo kansalay goolkii furitaanka ee Aguero ayuu haddana Sane noqoday xidiga go’aamiyay saddexda dhibcood Etihad Stadium loogaga qaatay.
Kooxda City ayaa afar dhibcood u soo jirsatay Liverpool waxayna sare u soo qaaday rajadeedii xumaatay ee ay ku doonaysay in ay koobka Premier league is laheysiiso.
Dhanka Liverpool ayaa awoodeeda iskugu geysay weerarka iyada oo Macalin Klopp uu saaray Wijnadum wuxuuna ciyaarta soo galiyay Sturridge halka Guardiola uu difaaciisa ku soo adkeeyay Kyle Walker wuxuuna saaray Laporte wuxuuna sidoo kale Guardiola keenay Otamendi isaga oo saaray Company oo jug soo gaartay loo saaray bannaanka.
Ciyaarta intii ay socotay daqiiqadii 90 aad Manchester City ayaa heshay fursad ay ciyaarta si dhab ah hurdada ugu diri kartay kadib markii uu Lovern kubbad u lumiyay Bernardo Silva oo goolka horjoogay laakiin goolhaye Alisson ayaa sameeyay badbaadin cajiib ah si uu wali rajada kooxdiisa nolol ugu sii hayo halka Sterling oo kubbada la soo saaray meel cajiib ah ku helay uu banaanka mariyay kubadda.
Dadaal badan oo ay sameysay ciyaarta Liverpool ayaa wax walba u samaysay sidii ay goolka barbaraha ku keensan lahayd laakiin Manchester City ayaa shaqadeeda ka dhigatay sidii ay waqtiga kooban ee ciyaarta ka hadhsanaa ay natiijada ku adkeysato si 3-da dhibcood ee ciyaarta ay nadiif u hesho.
Gabagabadii iyo gunaadadkii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Manchester City guuldaradii ugu horaysay ee xili ciyaareedkan ku soo baday Liverpool kulan Premier league ah, waxayna Manchester City awooday in ay saddexda dhibcood ka reebtay Liverpool si ay 4 dhibcood ugu soo koobto hogaamintii Liverpool ee Premier league-ga.
Daawo Goos Goosyadii laga sameeyey Manchester City iyo Liverpool